Coronavirus: Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo laga helay - BBC News Somali
Coronavirus: Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo laga helay
27 Maarso 2020
Lahaanshaha sawirka SFG
Image caption Nuur Cade- ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo baxay warar sheegaya in uu magaalada London ee dalka Britain ku xanuunsan yahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xassan Xusseen (Nuur Cadde).
"Xaaladda ra'iisul wasaare Nuur Cadde aad ayay u wanaagsan tahay, waxaan filayaa in bulshada Soomaaliyeed ay la socoto in uu xanuunsan yahay oo isbitaal ku yaala London uu ku jiro, halkaasina lagu daweynayo, xaaladiisana waa ay degan tahay hadda, London ayuu degan yahay, waxaana halkaas ku qabsaday feyraska corona", ayuu yiri wiilka Nuur Cadde.
Wuxuu intaa ku daray in xaaladiisa ay kasoo reyneyso, sababta isbitaalka loo geeyayna ay tahay in uu qabo xanuuno ay kamid yihiin macaankaa ama sonkorta, waxaana uu yiri "sideed maalmood kahor ayaa lagu arkay xanuunka".
Lahaanshaha sawirka Sayyid Azim
Sidoo kale xanuunka ra'iisul wasaare Nuur Cadde ayaa waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Xassan Cali Kheyre oo sheegay in xaaladda Nuur Cadde uu kala xiriiray qoyskiisa.
"Waxaan alle ka baryayaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo Ra'iisul Wasaarahii hore ee dalka, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo ku xanuunsanaya London. Waxaan khadka teleefanka kula hadlay qoyskiisa aniga oo gaarsiiyay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin"ayuu ku qoray baraha bulshada uu ku leeyahay.
Nuur Xassan Xusseen, Nuur Cadde ayaa Soomaaliya ra'iisul wasaare kasoo noqday dowladdii kumeel gaarka ahayd ee sanadkii 2007-da, waxaana uu lasoo shaqeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Cabdullaahi Yuusuf (AU).